Home CLASSIC STARS Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny rakitra manontolo momba ny mpilalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Ronnie'. Ny tantaran-tantaran-tantaran'i Ronaldinho momba ny tantaram-pitiavan'olon-tiana mihoatra ny zava-misy momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Tsy misy fisalasalana be loatra, Ronaldinho dia mpilalao fanta-daza amin'ny baolina baolina kitra. Heverin'ny maro ho mpilalao lehibe indrindra amin'ny taranany izy ary iray amin'ny tsara indrindra amin'ny tantara. Afaka manomboka izao.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiainana tany am-boalohany
Ronaldinho amin'ny maha-zaza azy
Voalohany, Ronaldinho dia tsy teraka toa an'i Ronaldinho na Ronaldinho Gaúcho. Rehefa teraka izy, dia nametraka ny anarany Ronaldo de Assis Moreira. Teraka tamin'ny 21st of March, 1980, tany Porto Alegre, Brezila. Ny rainy, João Moreira, dia mpandrafitra vy / mpanodina tao amin'ny toeram-piompiana iray. Izy koa dia mpilalao baolina taloha. Miguelina de Assis, reniny, dia mpivaro-pahaizana momba ny varotra izay lasa mpitsabo mpanampy.
Ronaldinho dia nanam-bintana avy amin'ny fianakaviana mpilalao baolina kitra satria ny dadany sy ny zokiny lahy dia mpilalao baolina taloha.
Ny tanànany ao Porto Alegre dia nalaza noho ny maha-tanàna iray mahantra sy mampalahelo indrindra any Brezila. Matetika ny fianakaviany dia sahirana amin'ny vola ary mitazona trano. Ny fialana amin'ny baolina kitra ary ny fifantohana amin'ny orinasa mpitrandraka dia tsy mahafeno fepetra ho an'ny rainy mihitsy. Tsy maintsy nametraka ny fanantenana rehetra ho an'i Roberto (Ronaldinho's brother elder) ny fianakaviana mba hiditra ao amin'ny klioban'ny matihanina ary hahazoana vola ampy ho an'ny tenany sy ho an'ny fanamafisana ny fianakaviana.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Reny i Ronaldinho. Niara-niasa tamin'i Gremio izy, iray amin'ireo mpilalao roa lehibe tao Porto Alegre mandra-pialany ny asa mba hipetraka ho toy ny mpanodina ao amin'ny toeram-piompiana iray.
Ronaldinho sy Neny, Miguelina
Ronaldinho dia tsy saro-kenatra mihitsy raha manaiky fa zazalahin'i Mummy izy. Ny mamanany dia fantatra amin'ny anarana Dona Miguelina Elói Assis dos Santos, fa aleony ny hantsoina hoe Miguelina. Indray mandeha izy dia nanohana ny fianakaviany tamin'ny raharaham-barotra kosmetika alohan'ny nanenjehany ny nofinofiny lava ho lasa mpanampy matihanina raha tena tahaka ny ambany izy.
Deisy dia i Ronaldinho iray ary ny anabavy tiany indrindra izay nifikitra taminy nandritra ny fiainany. Ny lanjan'ny fanohanana an'i Deisy dia nomena ny hanomezana ny rahalahiny ho tsy misy fetra sy tsy misy fepetra. Izy dia mandray andraikitra ary mandrindra ny asa fanaovan-gazety rehetra ho an'ny anadahiny.
Ny Rahavavy Ronaldinho, Deisy
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny Big Brother Effect
Ny rahalahin'i Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, dia 10 taona lehibeny. Na dia fantatry ny ankamaroany aza ny fahalalany ny fitantanana ny asa sarobidin'ny zandriny (Ronaldinho) zandriny. Izy tenany aza dia talenta baolina kitra nanan-talenta tamin'ny fahatanorany. Raha ny marina, ny klioba breziliana Grêmio dia nanolotra tranom-bahiny ny fianakavian'i Assis mba hitazonana ny tanora tanora miaraka amin'ny klioba.
Tany am-piandohana dia nipetraka tao amin'ny trano hazo teo afovoan'ny fianakaviana ny fianakaviana faritra iva ireny na slum tany Porto Alegre, any atsimon'i Brezila. Tamin'io fotoana io, João (rainy), mpivaro-barotra tamin'ny varotra, dia niasa matetika ho fiambenana fiarovana ao amin'ny kianja Grêmio mba hanampiana ny fidiram-bolany.
Ny fahombiazan'i Roberto tamin'ny fahombiazan'ny mpilalao baolina kitra dia nanampy ny fianakaviany handao ny efamira any ambadik'ity trano ity, saingy ny fanantenany ny hilalao baolina ambony amin'ny Grêmio dia ripaka tanteraka raha naratra mafy ny lohalika.
Taona maromaro taty aoriana, i Ronaldo, zandriny lahy Ronaldo (fantatra amin'ny anarana hoe Ronaldinho), dia hipoitra toy ny talenta mafimafy kokoa tao amin'ny fametrahana ny tanoran'i Grêmio alohan'ny nandaozany ny tanindrazany ho an'ny Frantsay PSG ary farany ny klioba espaniola Barcelona, ​​izay niaraka nandritra ny dimy taona , talohan'ny nandehanany tany Milan tamin'ny 2008.
Ankehitriny, i Assis dia mpikarakara sy mpanolo-tsaina ny rahalahin'izy ireo, ary navoakan'ny maro, anisan'izany i Ronaldinho, ho toy ny fitaovana goavana sy mpitarika ny mpilalao.
Nandritra ny kabariny nankatoaviny taorian'ny nahazoany ny loka FIFA World of the Year nandritry ny taom-piasana faharoa tamin'ny volana desambra 2005, dia nanome voninahitra an'i Ronaldinho ny rahalahiny. Araka ny heviny "Roberto ny sampy. Efa be dia be izy ary nanampy ahy ny dingana rehetra. Namporisihany aho mba tsy hitsahatra ny fanandramana. "
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny fomba fiasan'i Roberto Molded Ronaldinho
Ronaldinho dia nahazo tsindrimandry avy amin'ny zokiny lahy ary nanomboka nilalao baolina tamin'ny taona 7.
Nandany ny ankamaroan'ny taona nahalehibe azy izy tamin'ny fanatontosana iray tamin'ny fampiofanana iray niaraka tamin'ny rahalahiny tany amin'ny tanàna nahantra sy sahirana. Roberto dia nahita ny hoavin'ny zandriny lahy ary nanao izany izy tamin'ny famoronana sehatra fanofanana isan'andro ho azy. Nanomboka izy avy eo naka an'i Ronaldinho kely tany an-tsaha taorian'ny nifaranan'ny fotoam-pampianarana. Indraindray dia tsy nahavita ny fampiofanana azy manokana izy mba hanokana fotoana hampiofanana ny zandriny lahy.
Araka ny voalazan'i Ronaldinho, "Roberto dia nanosika ahy hanao ny asan'ny 500 amin'ny fotoana rehetra. Nitsangana izy hijery ahy hanao izany ary tsy handeha mandra-pahavitako. Nalaiko daholo ny fahafinaretana tamiko, ary tamin'io taona io, dia tezitra be aho. Nitomany aho. Tsy azoko izany. Saingy taty aoriana dia takatro izay tiany "
Roberto no namorona izao fahaiza-manao manaraka izao ary nandalo izany tamin'ny zandriny lahy. Ireto manaraka ireto; (1) Ny fampiharana ny baolina kotaba sy ny fikarakarana ny tany sy ny rivotra. (2) Mianatra ny mandady ny lohalika (3) Mianara tsy hijery amin'ny baolina (4) Mianara manao fomba fihetsika raha hihodina 1 metatra avy amin'ny mpanohitra ary (5) Mianara fomba hamehana aorian'ny fivoahana rehetra.
Tamin'ny taonan'ny 7, Ronaldinho dia afaka nandomoka ny baolina mafy, nanaisotra baolina marim-pototra ary nanao fehezam-boninkazo mahatalanjona sy nampiasa ny fisainany. Ny fampiofanana tany ivelan'ny faritra fampionona dia azo antoka fa nahatonga an'i Ronaldinho hampivelatra fahaiza-manao izay tsy noeritreretiny mihitsy hoe tao aminy. Tamin'io fotoana io no nanorenana ny fahaiza-manao manaraka. Ireo fahaizana ireo dia ahitana;
(1) The FlipFlap / Elastico (2) Ny No Look Passing and dribbling (3) Making Freekicks Patented (4) manao ny Hocus Pocus tiany indrindra (araka ny hita eo amin'ny sary avy amin'ny havia) ary farany (5) Manao ny sarotra Joga Bonito dribble. Ireo fahaiza-manao ireo dia haseho any amin'ny tapany aoriana amin'ity lahatsoratra ity. Mendrika ny hanamafisana fa i Ronaldinho dia nametraka ireo fahaiza-manao ireo ho an'ny fustal fa tsy baolina kitra. Izany no fiovan'ny fustal ho baolina kitra izay nitondra fiovana ho an'ny fiainany ho mpilalao baolina kitra.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Relationship Life
Ronaldinho dia nihaona tamin'i Janaína Mendes taorian'ny mondialy 2002 ary samy lasa tia. Nanapa-kevitra ny hamatotra ny knots izy ireo rehefa avy niarahana nandritra ny roa taona. Tamin'ny 25th of February 2005, Ronaldinho sy Breziliana mpandihy Janaína Mendes dia nanan-janaka lahy antsoina hoe João izay nantsoiny taorian'ny dadany farany.
Ronaldinho dia olona feno fifaliana sy fiainana. Ny vadiny dia mahafantatra azy amin'ny maha-lehilahy mahafinaritra azy tsy misy fotoan-tsarotra. Mandray fotoana foana miaraka aminy izy.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny fahafatesan'ny Ray
Ronaldinho dia nanaisotra ny rainy foana na dia taorian'ny nahafatesany aza. Ny rainy dia iray amin'ireo olona manan-danja indrindra ho azy sy ny asany, na dia maty aza izy tamin'izy mbola kely.
Ny fahafatesan'ny rainy dia tranga mampalahelo izay niseho tamin'ny volana Janoary tamin'ny 1989. Volana maizina iray izay nahafatesan'i Ronaldinho ny mpanazatra voalohany. Ny fanontaniana eto dia ny tena marina? Inona no nitarika ny fahafatesan'ny rainy? ... Izany no izy;
Ny Rahalahy Roberto Ronaldinho dia nanangona vola avy amin'ny fifanarahana amin'ny fifanarahana amin'ny ekipa football club Grêmio. Nividy trano izy ary namela ny fianakaviany handao ny trano efa tranainy any amin'ny trano maoderina manana dobo filomanosana.
Tamin'io andro nahatoky io, rehefa niverina avy tamin'ny fampiofanana ho an'ny fianakaviana nivory i Roberto mba hankalaza ny tsingerintaona faha-18 nahaterahany sy ny fitsingerenan'ny ray aman-dreniny, dia hitany ny fahatairan'ny fiainany. Hitany fa nampijaly ny fo ny ra rehefa nilomano. Ronaldinho dia valo taona monja tamin'izany fotoana izany.
Araka ny voalazan'i Ronaldinho, "Nanome ahy ny torohevitra tsara indrindra nananako ny dadako. Tao an-tsaha izy no nilaza tamiko mba hanao ny marina ary ho olona marina sy mahitsy. Ary teny an-kianja: notantarainy tamiko foana ny hilalao baolina kitra araka izay tratra. Nilaza foana izy fa ny iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra azonao atao dia ny mitendry izany tsotra.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fampijaliana mahatsiravina amin'ny asa ataon'ny Rahalahy
Matetika i Ronaldinho no nitanisa ny zokiny lahy (Roberto) noho izy nihazakazaka nanambady azy taorian'ny nahafatesany. Taorian'ny fahafatesan'ny rainy, dia i Roberto izay nandray andraikitra fanampiny ho an'ny fianakaviana.
Nikarakara an'i Ronaldinho sy ny rahalahiny hafa izy niaraka tamin'ireo vola azony tamin'ny baolina kitra. Indrisy anefa, ny asa an-tsitrapo nataony dia navotsotra tampoka noho ny fahasimbana naterany nandritra ny filalaovany ny klioban'i Garmio.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiainana aorian'ny fahafatesan'ny Ray
Natahotra i Ronaldinho fa mbola mahantra indray ny fianakaviany aorian'ny fiafaran'ny asa ataon'ny rahalahiny. Ny fandripahana dia midika fa tsy afaka nilalao intsony i Roberto ary nahazo vola ampy hananana ny fenitra velona.
Antso ho an'i Ronaldinho izany. Fotoana iray tsy maintsy nibata sy niaina ny famoahany. Tamin'izay fotoana izay, tapa-kevitra ny hanao haingana izy. Tsy maintsy nampihatra ny ezaka ampy teo amin'ny baolina kitra izy. Tsy maintsy noraisiny ho toy ny ampahany amin'ny hoaviny io fiheveram-pirenena sy eran-tany io.
Nanomboka i Ronaldinho tamin'ny naha-mpiara-miombon'antoka ny futsal (Ny lalao baolina kitra no nilalao tao an-tokotanin'ny kianja mafy ary mpilalao dimy monja amin'ny lafiny tsirairay) sy lalao baolina kitra. Nila fotoana kelikely izy vao nanomboka nihaino. Ireo mpankafy vao haingana dia nahafantatra azy ho ilay zazakely kely sy tsara indrindra izay afaka nanatanteraka tsy tapaka ny samba Breziliana tamin'ny lalao baolina kitra sy lalao ivelany. Amin'izao fotoana izao dia anarana hoe 'Ronaldinho' (midika hoe Small Ronaldo) dia neken'ny namany sy ny mpankafy azy tanteraka. Tsara ny manamarika fa i Ronaldinho dia mpilalao kely indrindra teo amin'ny sehatra nandritra ny fotoanany tao amin'ny akademia.
Araka ny nambarany, "Niantso ahy ry zareo satria tena kely aho. Niaraka tamin'ny mpilalao toa ahy manokana aho Ronaldo Luis Nazario de Lima izay efa zokiko. Araka ny hitan'ny olona dia nisy iray hafa Ronaldo izay lehibe, tsara kokoa ary lehibe, nanapa-kevitra ny hiantso ahy Ronaldinho. Nanaiky izany aho satria nanaja azy ary izaho mbola kely. "
Fanamarihana: Nahazo ny sombin-taratasim-paritany teo an-toerana i Ronaldinho nantsoina hoe "Ronald" noho ny habeny. Ao amin'ny portogey misy azy, midika hoe kely na kely ny "inho".
Ny ankamaroan'ny fotoana, ny ekipan'ny tanora Ronaldinho dia mila manao toy ny kianja fanaovana lalao. "Ny zana-kisoa irery ihany no teo an-jorony," Ronaldinho mahatsiaro. "Tsy nisy ahitra teo afovoany! Fasana fotsiny izany. "
Ireo traikefa voalohany niaraka tamin'ny futsal dia nanampy tamin'ny fanatsarana ny fomba filalaovany manokana, izay nanamarika tamin'ny fanatsarana ny fanamafisam-peo mahagaga sy ny fanaraha-maso ny baolina izay nianarany tamin'ny Roberto zokiny lahy. Hoy i Ronaldinho indray mandeha, "Maro amin'ireo fihetsika nataoko no niandohan'ny futsal ary nampianarin'i Roberto ahy. Tao an-tsain'ny andro fandihizako dia somary mitovy amin'ny fifehezan'ny mpilalao baolina ny baoliko kitra. "
Ronaldinho koa dia naka fotoana nandalinana ireo goavambe taloha toy ny Pelé, Ziko ary Rivellino ary nanonofy hanaraka ny dian-tongony.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -The Turning Point
Tonga ihany i Ronaldinho tamin'ny farany. Nomena azy ho mpilalao baolina kitra malaza indrindra any Brezila izy rehefa nahazo baolina tebiteby 23 amin'ny lalao tokana amin'ny taonan'ny 13. Ny tanjon'izy ireo dia ny hitarika ny ekipany ho amin'ny lalao junior lehibe. Ankoatra izany, tonga tao amin'ny 1997 io teboka io raha nisy Ronaldinho zandriny nandresy ny ekipa nasionalin'i Under-17 any Brezila.
Tamin'ity taona ity izy no nitarika ny ekipa ho any amin'ny FIFA Midi-Fiadiana Tompon-daka Eran-tany ao Ejipta. Izy koa dia nofantenana ho mpilalao mahay indrindra amin'ny fifanintsanana. Tsy ela taorian'izay dia nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany i Ronaldinho mba hilalao an'i Grêmio, iray amin'ireo ekipa malaza indrindra amin'ny Ligy Breziliana. Ny taona manaraka dia nomena fahafahana izy hanao ny laharam-boninahitra voalohany amin'ny Copa Libertadores. Tsy ela dia lasa mpikambana ao amin'ny ekipa izy ary mpikatroka kintana mandra-piveriny tany Paris Saint-Germain tamin'ny volana Aprily, 17 ho an'ny € 2001 tapitrisa. Ronaldinho ihany koa dia nokaramain'ireo fikambanana malaza maro, anisan'izany i Arsenal FC, ekipa Londres. Narahiny ny soso-kevitry ny rahalahiny hanasonia ny PSG.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny Mondialy 2002
Raha mbola nilalao tamin'ny PSG i Ronaldinho, dia nanohy niatrika ny ekipa nasionaly Breziliana tamin'ny lalao fifaninanana iraisam-pirenena. Ny asany dia nahatonga azy nofinidy tao amin'ny kaonty 2002 XNUMX.
Nandritra ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany 2002 izy dia anisan'ireo "trio Rs" -Ronaldinho, Ronaldo, ary Rivaldo -Ronaldinho, Ronaldo ary Rivaldo-izay nanampy an'i Brezila handresy ny lohatenin'io taona io, sy ny baolina 30-yard izay nipetrahana tao anaty aterineto nandritra ny Ny ampahaefatry ny ampahaefatry an'i Angletera dia iray amin'ireo zava-misongadina amin'ny hetsika.
Nandripaka an'i Alemana i Brezila noho ny lohatenin'ny tanjona roa tonta, roa tonta nahazo ny R, Ronaldo Luis Nazario de Lima.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Tranferan'i Barcelona
Tao amin'ny 2003 dia nanambara i Ronaldinho fa vonona ny handao an'i Paris Saint-Germain izy, ary nisy adihevitra mafàna ho an'ny fanoloran-tenany matihanina. Izy no nanara-maso ny ekipa roa tsara indrindra ao Eoropa, FC Barcelona sy Manchester United. Naka ny torohevitry ny rahalahiny indray izy ary nanao sonia an'i Barcelona tamin'ny Jolay 19, 2003.
Ny sonia ho an'ny klioba dia nanatanteraka nofinofy iray niaina nandritra ny androm-piainany manontolo mba hanatevenana ny fikambanan'ny mpilalao indrindra amin'izao fotoana izao, ankoatra izany, ny fandresena ny jiolahim-borona 10 malaza amin'ny ankapobeny. Ny fahatongavany tao amin'ny tanàna baolina kitra dia zava-nitranga lehibe, niaraka tamin'ireo mpankafy 25,000 nitodika azy.
Tao amin'ny vanim-potoanan'ny 2005-06, nilalao anjara asa manan-danja izy tamin'ny nanampiana an'i Barcelona handresy ny lahatsoratry ny Ligy ligy voalohany tamin'ny taona 14.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Nanomboka ny Fety amin'ny 30 farany
Ronaldinho dia nandray anjara tamin'ny fitarihana antoko maro. Ity tetikasa ity dia iray amin'ireo biby lehibe indrindra amin'ny biby.
Izany no fiainany ivelan'ny kianja.
Tiany ny manatrika ireo karnavalina sy antoko breziliana lehibe indrindra sy manerantany manerana izao tontolo izao. Izany no antony nanohanany ny lazany ho biby lehibe indrindra eo amin'ny planeta. Ny fomba fijery ivelany sy lojika momba ny asany lalao baolina kitra dia ny hoe rehefa nandà fahafinaretana ho azy manokana izy mandrapahatongan'ireo 30 farany, dia afaka nandany ny androny tamin'ny androm-piainany i Ronaldinho.
Tsy toa safidy izany anefa. Araka ny nambarany, "Fohy ny androm-piainanao ary mety hiafara amin'ny tsy ampoizina-mba ankafizo izany raha azonao atao."
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fialana amin'ny loza
Ronaldinho dia efa nidaroka fotoana iray raha mbola handeha amin'ny fankalazana ny fitsingerenan'ny reniny any Porto Alegre izy. Nitranga tamin'ny alatsinainy ny fiaran'ilay mpamily iray manokana, niditra an-tsambo.
Ny mpilalao roa ambinin'ny FIFA roa taona amin'ny mpandresy tamin'ny taona dia nandositra tsy nahy tamin'ny lozam-pifamoivoizana tany Brezila.
"Tsy zava-dehibe izany," Ny rahalahin'i Ronaldinho sy ny mpanohana Roberto de Assis dia nilaza tamin'ny gazety. "Soa ihany fa tsy nisy naratra. Izay no zava-dehibe indrindra. "
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Cars
Ny Ronaldinho FC Barcelone dia hantsoina ho iray amin'ireo mpanao fampisehoana lehibe indrindra amin'ny baolina kitra, fa angamba ny Breziliana no nankafy ny ankamaroan'ny fotoanany tamin'ny kianja, fa tsy teo aminy. Eo amin'ny saha, fantany fa lehilahy iray manana maso amin'ny fiara tsara tarehy.
Ny mpilalao baolina kitra dia olo-malaza avy amin'ny fiaramanidina, ary hita amin'ny fampiasana fiarabe maro samihafa.
Na any amin'ny club club na eny an-kianja, i Ronaldinho dia mitazam-pandehanana ny vahoaka.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Big Brother, nogadraina.
Ny rahalahin'ny mpikarakara an'i Ronaldinho, kintan'i Brezila, Roberto de Assis Moreira, dia nogadraina dimy taona sy dimy volana an-tranomaizina noho ny fiampangana fanodinkodinam-bola sy ny fandaniana hetra.
Araka ny fiampangana, i Robert dia nanafina ny famindrana ny US $ 884,000 avy amin'ny Banky foibe Breziliana, ary nanova ny hetsiky ny fananana sarobidy R $ 776,000 ary ny fametrahana US $ 125,000 ao amin'ny kaonty Swiss tsy manambara ny manampahefana. Ny zava-nitranga dia nitranga teo anelanelan'ny 2003 sy 2004. Roberto dia nanolotra ny fotoanany am-ponja ary dia olona afaka
Ankoatry ny fiampangana fanodinkodinam-bola, nizaka ny tenany manokana ihany koa izy tamin'ny farany tamin'ny fikatonan'ny klioban'ny baolina kitra any Porto Alegre, sy ny kliobany alina tao an-tanàna taorian'ny famonoana.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fitiavana an'i Pepsi
Ronaldinho dia nahazo fampahalalana miaraka amin'ny orinasa marobe, anisan'izany i Nike, Pepsi, Coca Cola, EA Sports, Gatorade ary Danone sns. Tamin'ny 2006 dia nahazo $ 19 tapitrisa avy amin'ny fanekena. Nanaja an'i Pepsi noho ny ankamaroan'ny asany izy ary niseho tamin'ny dokambarotra niaraka tamin'i David Beckham, Thierry Henry ary i Lionel Messi.
Ronaldinho nanao sonia fifanarahana tamin'i Coca-Cola tao amin'ny 2011, na izany aza dia nodidiana tamin'ny Jolay 2012 taorian'ny nisamborana an'i Pepsi tao anaty valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Hamaky ny tohiny ...
Iray amin'ny Pep Guardiola Nifindra aloha ny lehiben'ny mpiasan'ny Barcelona manaisotra amin'i Ronaldinho. Ny fanontaniana eo amin'ny molotra rehetra dia ..... Nahoana izy no nanao izany? ... fantany tsara fa Ronaldinho dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ny klioba satria nisy olona iray nahavita fahombiazana tamin'ny Barcelona.
Ronaldinho dia hita ho olona nanampy ny fitomboana Lionel Messi.
Izao no marina: Nolazain'i Ronaldinho fa misy fomba fiaina miavaka eo ivelan'ny kianja. Nolazainy fa ny fomba fiainany dia nanosika azy hampidi-doza. Na izany aza, Guardiola ny Ny fanapahan-kevitra dia niteraka adihevitra tamin'izany fotoana izany. Izany no mahatonga ireo mpankafy baolina kitra maro tsy tia azy hatramin'izao.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny fahaizana 5 izay nanaporofo fa izy no mpilalao baolina kitra lehibe indrindra
(1) Taorian 'ny nipoitra teo amin' ilay seho manaraka izany freekick manohitra an'i Angletera amin'ny World Cup 2002, i Ronaldinho dia nanamboatra ny làlana hitrangan'ny Magic in football.
(2)Ny Style FlipFlap Elastico: Rehefa nijery voalohany ity hetsika ity dia namory ny eritreritry ny siansa lehibe indrindra manerantany ho an'ny fihaonambe iraisam-pirenena ny NASA. Tamin'io fihaonam-be io dia voalaza fa nisy lehilahy iray izay afaka nanery ny lalànan'ny fizik. Ronaldinho Gaúcho no anarany.
Maro no nanandrana izany ary tsy nahomby. Ohatra hita eto ambany;
(3) No Look Passing: Efa nanandrana nilalao baolina tamin'ny mason'olona ve ianao? Ny teny fitenenana taloha hoe "mitandrema amin'ny baolina" dia tsy hita ao amin'ny rakibolana Ronaldinho.
(4) Hocus Pocus: Io dia iray amin'ireo fahaizana matematika indrindra nataon'i Ronaldinho, izay mitaky ora amin'ny fampiofanana amin'ny sehatra fampiofanana mandritra ny fotoana voafaritra iray amin'ny sehatra.
(5) Ny Style Joga Bonito: Aza matahotra ary aza manamboatra ny efijery. Ity no style Joga Bonito noforonin'i Ronaldinho.
Ronaldinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -LifeBogger Rankings
Mampiseho ny fisian'ny olona izay antsoina matetika hoe maestro amin'ny baolina kitoatoa.
Aza misalasala mandefa ny tsikinao ary vakio ireo lahatsoratra mifandraika amin'izany.
Presnel Kimpembe Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Bojan Krkic tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Janoary 19, 2020
Ny tantaran'i Marcelo Childhood Plus Untold
Oktobra 20, 2017